सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू - Hesperian Health Guides
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > महिलाका लागि डाक्टर नभएमा > यस भागमा 17: एचआइभी र एड्स > सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू
यस अध्यायमा उल्लेख गरिएका सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरूका लागि Where There Is No Doctor(डाक्टर नभएमा) पुस्तक वा स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी अन्य किताबहरू पनि हेर्नुहोस् ।
एचआइभी भएका व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरुले सजिलै बिरामी पार्छ । यस अध्यायमा यी सामान्य समस्याहरूबारे सूचनाहरू र कसरी रोगीको स्याहार गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिएको छ यी समस्याहरू मध्येकुनै एक समस्या भएकै कारणले कसैलाई एड्स भएको हो भन्न सकिन्न । यहाँ दिइएका जानकारी यी समस्याहरू परेका कुनैपनि बिरामीका लागि उपयोगी हुनसक्छन् ।
१.२ स्वास्थ्यकर्मीबाट सहयोग लिने अवस्था
२.१ पखालाले निम्न समस्या गराउँछ :
२.१.१ जलवियोजनका लक्षणहरू :
२.१.३ औषधि लिनु पर्ने खालको पखाला :
२.१.४ अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू :
३ छालामा डावर उठ्नुर चिलाउनु
३.२ फंगस (ढुसी) संक्रमण
३.३ मुख वा छालामा खैरा वा बैजनी रंगका धब्बाहरू देखिनु
३.४.१ Tऔषधि बिना उपचार :
३.४.२ औषधि बाट उपचार (यी मध्ये कुनै एकको प्रयोग गर्नुहोस् :
३.५ जनै खटिरा (Herpes Zoster)
४ वाकवाकी लाग्नु तथा वान्ता हुनु
४.२ धेरै वान्ता छिटो–छिटो भएमा :
४.२.१ कस्तो अवस्थामा सहयोग लिने ?
६ मुख र घाँटीका समस्याहरू
६.१ मुख तथा घाँटीभित्र घाउ हुनु
६.२ मुख वरिपरि घाउ हुनु, फुट्नु तथा पानी फोकाहरू आउनु
६.३ मुखभित्र सेता धब्बाहरू आउनु
६.४ भोजन नलीमा धव्वा आउनु
७ घाउ तथा खटिराहरू
७.१ संक्रमण भएका घाउ तथा खटिराहरूको उपचार :
८ मानसिक उल्झन (सुद्धी हराउनु)
९.१ दुखाइको उपचार (औषधि प्रयोग नगरी) :
९.२ औषधिहरू द्वारा दुखाइको उपचार :
ज्वरो आफैमा कुनै रोग होइन, यो आउँछ र निको पनि हुन्छ । यो उपचार गर्न सकिने स्वास्थ्य समस्या हो । ज्वरो क्षयरोग हुँदा, तल्लोपेटमा संक्रमण हुँदा, पी. आई. डी. वा मलेरिया लाग्दा र एच. आई. भी. हुँदा आउँछ तर के कारणले ज्वरो आएको हो भनेर जान्न भने परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्वरो संक्रमणका कारणबाट भएको हो भने औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
ज्वरो जाँच्नका लागि थर्माेमिटरको प्रयोग गर्नुहोस् अथवा बिरामी व्यक्तिको निधारमा एक हात उल्टोगरी राख्नुहोस् र अर्कोहात आफ्नो निधारमा राख्नुहोस् । यदि बिरामी व्यक्तिको शरीरमा आफ्नो भन्दा बढी तापकक्रम अनुभव भयो भनेउसलाई ज्वरो आएको भन्ने थाहा हुन्छ ।
बिरामीलाई सुती कपडा लगाइदिनुहोस् र उसको कोठाभित्र ताजा हावा छिर्न दिनुहोस् ।
निधार तथा छातीमा पानीपट्टी दिनुहोस् र पंखा हम्कनुहोस् ।
बिरामीलाई तिर्खा नलागेको भए पनि प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ(तरल) दिनुहोस् । ज्वरो आएको बेलामा पसिना बढी आउनेहुनाले बिरामी व्यक्तिलाई धेरैजसो जल विनियोजन हुनसक्छ ।
प्यारासिटामोल, एस्पिरिन तथा आइवुप्रोफेन जस्ता ज्वरो घटाउने औषधिहरू मध्ये कुनै एकको प्रयोग गर्नुहोस् ।
छालालाई सफा र सुखा राख्नुहोस् । घाउ तथा घमौराहरू लाई
रोक्नका लागि मल्हम अथवा अन्य चिल्लोपदार्थ प्रयोग गर्नुहोस् ।
स्वास्थ्यकर्मीबाट सहयोग लिने अवस्था
ज्वरो धेरै नै बढेमा ( १०२ डिग्री फरेनहाइट वा ३९ डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी) ।
ज्वरो धेरै दिनसम्म आइरहेमा ।
खोकी, सास फेर्न अप्ठयारो र तौल कम हुँदैगएमा ।
गर्दन अररोभएमा, तीव्रपीडा भएमा अथवा अकस्मात ज्वरो सँगैतीव्र पखाला भएमा ।
गर्भवती वा भर्खरै सुत्केरी भएकी वा गर्भ तुहिएकी अथवागर्भपतन गराकी महिलालाई ज्वरो आएमा ।
मलेरियाको उपचार गरेर पनि उपचारपछि पनि ज्वरो नहटेमा ।
योनीस्राव र तल्लोपेट दुख्नुका साथै ज्वरो कआएमा ।
दिनमा तीनपटक वा सो भन्दा बढी पातलो तथा पानीजस्तो दिसा लाग्यो भने पखाला लाग्यो भनिन्छ । पखाला लागेको वा भएको बेला धेरैजसो सामान्य दिसा जाने जस्तै हुँदैन । पखाला त्यति कै लाग्न पनि सक्छ र रोकिन्छ पनि, निको पार्न कठिन हुनेपनि हुनसक्छ । एचआइभी भएका व्यक्तिहरूलाई पखाला धेरैजसो फोहोर खाना र पानी खानाले आन्द्राहरूमा हुनेसंक्रमण एच.आई.भी. संक्रमणबाट वा औषधिहरूको खराब असरहरूको कारणबाट हुने गर्दछ ।
पखालाले निम्न समस्या गराउँछ :
यदि एचआइभी भएकी महिलालाई महिना दिन देखि पखाला चलेको छ भने एआरटी शुरु गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
कुपोषण पखाला चल्दा शरीरबाट खाना तुरुन्त निस्कन्छ वा जान्छ । यसो हुँदा शरीरले पौष्टिक तत्वको प्रयोग गर्न सक्तैन । पखाला लागेको मानिसलाई भोक लाग्दैन र उसले प्रायजसो खाने गर्दैन । यी दुईवटै कारणहरूले कुपोषण हुनसक्छ ।
जलवियोजन पखाला चल्दा शरीरको तरल पदार्थ बढी खेर जान्छ र जलवियोजन हुन्छ । जलवियोजन गर्मी भएको बेला र ज्वरोआएको बेलापनि हुन्छ ।
जलवियोजनका लक्षणहरू :
पिसाब थोरै लाग्नु वा लाग्दै नलाग्नु
छाला चाउरी पर्नु
उभिंदा रिंगटा लाग्नु
दुई औंलाले छालालाई बीचमा च्यापेर तान्नुहोस् भएको हुन्छ । ... तानेको छाला तुरुन्तै पहिलेको अवस्थामा आएन भने त्यस व्यक्तिलाई जलवियोजन भएको हुन्छ ।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा ! यदि कसैलाई यी लक्षणहरू र वान्ता पनि भइरहेको छ भने नसाबाट वा गुदद्वारबाट सलाइन पानीचढाउनुपर्छ । कडा खालको जलवियोजन गम्भीर समस्या हो । आकस्मिक सेवाका लागि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था जानुहोस् ।
आमा यो खानुहोस
जलवियोजनलाई रोक्न सधै पिउनेभन्दा बढी तरल पदार्थ पिउने गर्नुपर्छ । फलफूलको रस, नरिवल पानी, वा दूध, चिनी कम भएको चिया, सुप, जाउलो र पुनर्जलीय झोलहरूले जलवियोजन हुन रोकथाम गर्छन् । तिर्खा नलागेपनि ५–१० मिनेटको फरकमा केही झोल पदार्थ पिइरहनुपर्छ ।
अलि अलि गरेर खाइरहनु । सजिलै पच्नेखालका खानेकुराहरू थोरै मात्रामा भए पनि खाने कोसिस गर्नुहोस् । खानेकुरा राम्ररी पकाउनुहोस् र त्यसलाई मिचेर या पिसेर नरम बनाउनुहोस् । गेडागुडी, मासु वा माछासँग मिसाइएका अन्नहरू तथा दूध, चिज, तथा दही र केरा पनि यो बेला खान सकिन्छ । नपकाइएका तरकारी, फलफूलको बोक्रा, खुर्सानी वा अत्यधिक गुलिया खानाहरु वा पेय पदार्थहरु नखानुहोस्। यस्ता चिजले झन् पखाला लगाउँछन् ।
औषधि लिनु पर्ने खालको पखाला :
यदि महिला गर्भवती वा स्तनपान गराउनेछिन् भने उनले नन्फ्लोक्सासिन प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
दिसामा रगत नदेखिए पनि ज्वरो आएर एक्कासि, तीव्र पखाला
चलेमाः [[को–ट्रिमोक्साजोल ४८० मि.ग्रा.कोदुईचक्कीका दरले दिनको दुई पटक १० दिनसम्म लिनुपर्छ । सल्फा औषधिको एलर्जी हुनेले त्यसको साटो ‘नरफ्लोक्सासिन’– ४०० मि.ग्रा. कोचक्की दिनको एकपल्ट मात्र लिने गर्नुहोस् । यदि यसले दुईदिन भित्रमा फाइदा नगरेमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहाँ जानुहोस् ।
ज्वरोन आएर रगत मासी परेमा, पानी वा आन्द्रामा बस्ने एक सानो जीवबाट हुन्छ । यसका लागि मेट्रोनाइडाजोल ५०० मि.ग्रा. ७ दिनसम्म दिनको तीन पटकका दरले लिनुपर्छ । दुई दिनपछि पनि तपाईलाई आराम भएन भने स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भेटनुहोस् ।
दीर्घकालीन पखाला । यस्तो अवस्थामा मलद्वार वरिपरि रातो घाउ (खटिराहरू) हुन सक्छ । यसो हुन नदिन दिसा गरेपछि हरेकपटक भ्यासलिन वा बोरेलिन जस्तो क्रिम लगाउनाले फाइदा हुनसक्छ । यस्तो व्यक्तिलाई हर्सापनि हुन सक्छ ।
एचआइभी भएका व्यक्तिलाई एक महिनादेखि पखाला चलिरहेको छ भने उनलाई एआरटी दिन शुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू :
जलवियोजनका लक्षणहरू छन् भने ।
अरूबेला जस्तो खान र पिउन नसक्ने ।
आरामको अनुभव नभएमा ।
धेरै ज्वरो १०२ डिग्री फरेनहाइट वा ३९ डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी) आएमा ।
ज्यादै पातलो दिसा भइरहेमा ।
औषधि खाँदा पनि रगत मासी रोकिएन भने ।
लगातार वान्ता भइरहेमा ।
सफा पानी पिउनुहोस् । 'प्रयोग गर्न ुभन्दा अघि पानीलाई सफा गर्नुहोस् । उमालेर वा फिल्टर गरेर पानीलाई सफा गर्न सकिन्छ ।
सफा र सुरक्षित खाना खानुहोस् । काँचो वस्तुहरू पखालिएको वा ताछिएको र मासुलाई राम्ररी पकाइएको छ, छैन भन्ने कुरामा निश्चित हुनुहोस् । खानालाई किटाणुहरू, फोहर, झिंगाहरू जनावरहरू बाट सुरक्षित राख्नुहोस् ।
सधैं हात धुनुहोस्
चर्पीको प्रयोग गरिसकेपछि वा बिरामीलाई चर्पीमा लगेपछि ।
मैला केटाकेटीहरू वा बिरामीहरूलाई नुहाइ धुवाइ गरिसकेपछि ।
खाना बनाउनु र खाना खानु अगाडि ।
वरिपरिको पानीको स्रोतलाई दूषित हुनबाट सुरक्षा गर्नुहोस् ।
छालामा डावर उठ्नुर चिलाउनु
छालामा के कारणले डावर उठेको र चिलाएको भनेर धेरै जसो अवस्थामा थाहा पाउन सकिंदैन । शरीरलाई सफा राख्नाले धेरै जसो छालाका समस्याहरू हुने गर्दैनन् । तसर्थ दिनको एकपल्ट साबुन लगाएर नुहाउने गर्नु होस् ।
यदि छाला अति नै सुक्खा हुने गर्छ भने साबुनको प्रयोग नगर्नुहोस् । नुहाइसके पछि भ्यासलिन जेल, ग्लिसिरिन वा तेल लगाउने गर्नूहोस् । खुकुलो सुती कपडा लगाउनुहोस् ।
प्राय गरेर एड्स भएका व्यक्तिहरूमा एलर्जीले हुने, प्रायगरी चिलाउनेर डावर उठ्नेगर्छ । कुनै कुनै व्यक्तिलाई सल्फा जस्तैको–ट्रिमोक्साजोल भएका औषधिका कारणले पनि खराब प्रतिक्रियाहरू हुन सक्छन् । यदि यी औषधि प्रयोग गरिरहेका बेला चिलाउने डावर, आँखा चिलाउने, वान्ता आउने वा रिंगटा लाग्ने जस्तो हुन्छ भने तुरुन्त औषधिहरू प्रयोग गर्न छोडेर स्वास्थ्य कायकर्ता सँर्ग सम्पर्क राख्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सल्फा रहित औषधि प्रयोग गर्दा फाइदा गर्नसक्छ ।
फंगस (ढुसी) संक्रमण
फंगसबाट हुने संक्रमणहरूको वर्णन गर्न वा फंगस संक्रमण नै भएको हो भन्न अलि गाह्रो हुन्छ, किनकि तिनीहरू हेर्दा भिन्न–भिन्न प्रकारका हुन्छन् । केही फंगसका संक्रमणहरू गोलो, रातो वा छालाको पाता जस्तो धब्बा भएका जस्ता देखिन्छन् र चिलाउने गर्छन् । एचआइभी भएका महिलाहरूमा बारम्बार योनीमा फंगसको संक्रमण भइरहन सक्छ ।
तल उल्लिखित शरीरका भागहरूमा छालाको समस्या छ भने तपाईलाई फंगस संक्रमण भएको हुन सक्छ ।
रातो र चिलाउने धब्बा भएका ठाउँहरूलाई सफा र सुखा राख्नुहोस् । यदि सम्भव हुन्छ भने ती स्थानहरूलाई, खुला हावा र घाम पर्ने गरी राख्नुहोस् ।
निष्टाटिन क्रिम दिनको तीनपटक वा जेन्सन भायलेट दिनको दुईपटक डाबर पूर्ण रूपले नहराउन्जेल लगाइ राख्नुहोस् ।
यदि एकदम खराब किसिमको फंगस संक्रमण भएको स्वास्थ्यकर्मी सँग सल्लाह लिनुहोस् ।
मुख वा छालामा खैरा वा बैजनी रंगका धब्बाहरू देखिनु
यस्ता धब्बाहरू रगत जम्मा हुने ठाउँ (ब्लड भेसल्स) वा लिम्फ नोड्सको क्यान्सरको कारणबाट हुने गर्छन् जसलाई ‘कापोसिकोसारकोमा’(Kaposi’s Sarcoma) भनिन्छ । यस्तो हुँदा औषधिहरू सहयोगी हुँदैनन् । यदि मुखमा भएका धब्बाले गर्दा खाना खान गाह्रो भएमा स्वास्थ्य कार्यकर्तासित सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Tऔषधि बिना उपचार :
छालालाई चिसो राख्ने वा हम्किरहने,
छालामा तातोर तातोपानी नपार्ने,
नकन्याउने यसो गर्दा झन् बढी चिलाउँछ र कहिले कहीँ संक्रमण हुने गर्दछ । संक्रमण हुन नदिन नङलाई छोटो र सफा गरी राख्नुहोस् ।
भिजाएको चिसो कपडा प्रयोग गर्नुहोस् वा गाउँ घरमा चिलाउँदा फाइदा गर्नेकुनै रस भए प्रयोग गर्नुहोस् ।
औषधि बाट उपचार (यी मध्ये कुनै एकको प्रयोग गर्नुहोस् :
एन्टिहिस्टामिन औषधिको प्रयोग गर्दा गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाले सावधानी लिनुपर्छ ।
आवश्यकतानुसार कालामाइन झोललाई लगाउनुहोस् ।
दिनको तीनपटक थोरै मात्रामा एक प्रतिशतको हाइड्रोकोर्टिसोन क्रिम वा मल्लम लगाउनुहोस् ।
खाने चक्की एन्टीहिस्टामिन जस्तै डाइफेनीड्रामाइन लिनुहोस् । यसलाई दिनको चार पटक २५ ग्रामको दरले लिने गर्नुपर्छ । एन्टिहिस्टामिनले निन्द्रा लगाउन सक्छ ।
जनै खटिरा (Herpes Zoster)
जनै खटिरो भाइरसको कारणबाट हुन्छ । यो प्रायजसो कष्टकर हुने पानी भरिएको घमौरा जस्तो भएर आउन सुरु गर्छ र केही पछि फुट्न सक्छ । यो सामान्य तया धेरै जसो अनुहार, ढाड र छातीमा आउने गर्छ । यो भएका ठाउँमा पोल्ने र अति दुख्ने गर्दछ । घमौरा वा डावर आउन सुरु गरेको केही हप्तापछि निको हुन्छ तर दुखाइ भने पछि सम्म पनि रहन सक्छ ।
चिलाउने र दुखाइ कम गर्नका लागि दिनको दुईपटक कालामाइन झोल लगाउनुहोस् ।
घाउलाई सुखा राख्नुहोस् । कपडा घाउमा टाँसिन नदिन त्यसलाई हलुकासँग सफा रुमालले ढाक्नुहोस् ।
संक्रमणलाई रोक्नका लागि जेन्सन भायलेट झोल लगाउनोस् ।
‘एसिक्लोभिर’ औषधिले पनि केही मद्दत गर्न सक्छ तर गाउँ घरमा नपाइने र महंगो पनि छ ।
जनै खटिरो भएका व्यक्तिले आफ्नो आँखा माड्नु हुँदैन या छुनुहुँदैन । नत्र आँखामा यो रोग फैलेर आँखा बिगारे र अन्धो बनाइ दिन सक्छ ।
वाकवाकी लाग्नु तथा वान्ता हुनु
वाकवाकी लाग्दा तथा वान्ता भइ रहँदा मानिसलाई खान र पिउन गाह्रो पर्ने गर्छ जसले गर्दा मानिस कमजोर र कुपोषित हुन्छ । उसलाई जलवियोजन पनि हुन्छ । केही मानिसहरूमा वाकवाकी तथा वान्ता धेरै दिनसम्म भइराख्छ । वाकवाकी तथा वान्ता तल उल्लिखित कारणहरूले पनि हुन सक्छ :
विभिन्न संक्रमण हुँदा
औषधिहरूको सेवन गर्दा
पेट वा आन्द्राहरूको समस्या हुँदा
एच.आई.भी. संक्रमण हुँदा ।
बिहानै उठ्दा थोरै मात्रामा सुखा खानेकुरा (जस्तै ः च्यूरा, सुखा रोटी, आदि) खाने गर्नुहोस् ।
खाना पकाएको गन्ध आउने ठाउँमा नबस्नुहोस् । यदि कुनै खाना वा त्यसको गन्धले वाकवाकी आउने गर्छ भने ती खानाहरू खान छाडिदिनुहोस् ।
थोरै मात्रामा पुदिना, अदुवा वा दालचिनीको चिया पिउनुहोस् ।
कागती चाट्नुहोस् ।
वान्ताको खराब गन्धबाट मुक्ति पाउनका लागि बारम्बार दाँत सफा गर्ने र मुख कुल्ला गर्ने गर्नुहोस ्।
घर भित्र वा कोठामा ताजा हावा छिर्न दिनुहोस् ।
कपडालाई चिसोपानीमा भिजाएर निधारमा राख्नुहोस् ।
यदि यस्तो समस्या आफूले प्रयोग गरिरहेको औषधिबाट उत्पन्न भएको हो भने यसको बदला अर्को औषधिको प्रयोग गर्नुहोस् ।
धेरै वान्ता छिटो–छिटो भएमा :
दुई घण्टासम्म केही पनि खाने तथा पिउने नगर्नुहोस् ।
दुई घण्टापछि तीन चिया चम्चा पानी, जीवनजल वा अन्य सफा तरल पदार्थ प्रत्येक घण्टामा पिउने गर्नुहोस् । प्रत्येक घण्टामा बिस्तारै पिउने तरल पदार्थको मात्रालाई चार देखि छ चम्चासम्म बढाउँदै लानुहोस् । वान्ता हुन छाड्यो भने पिउने तरल पदार्थको मात्रालाई बढाउँदै लानुहोस् ।
यदि बिरामी व्यक्तिको वान्ता रोकिएन भने प्रोमथाजाइन चक्की आवश्यकता अनुसार २५ मि.ग्रा देखि ५० मि.ग्रा. प्रत्येक ६ घण्टामा लिनुहोस् । औषधि नै वान्ता भइरहेमा यसको गूद्धारमा राख्ने गोली पनि पाइन्छ सो राख्नुहोस् ।
वाकवाकी हराएपछि पुनः थोरै मात्रामा खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस ्। सादा खाने कुराहरू जस्तै पाउरोटी, भात, जाउलो वा लिटो खान सुरु गर्नुहोस् ।
कस्तो अवस्थामा सहयोग लिने ?
बिरामी व्यक्तिको २४ घण्टासम्म कुनै पनि खानेकुरा वा पेयजल पेटमा अडिएन भने ।
वान्ता सँगै पेट दुख्ने वा कडा ज्वरो छ भने ।
सहनै नसक्ने गरी वान्ता आउँछ र वान्ताको रंग गाडा हरियो वा खैरो छ तथा दिसा जस्तै गन्हाउने वा रगत मिसिएको छ भने ।
बिरामी व्यक्तिमा जलवियोजनका लक्षणहरू देखिएमा ।
खोकी लागेको छ भने धुम्रपान नगर्नुहोस् ।
खोकी लाग्न ुभनेको शरीरको श्वास–प्रश्वास प्रणालीलाई सफा राख्नेर खकार निकाल्ने प्रक्रिया हो । तर खोकी लागि रहनुभनेको फोक्सोको समस्या हुँदा अक्सर देखिने लक्षण पनि हो, जस्तै निमोनिया वा क्षयरोग हुँदा फोक्सोमा या संक्रमण हुन्छ । बढी खकार उत्पादन गर्दा खसखसाउछ । खोकी लागेर खकार आइरहँदा खोकी रोक्न कुनैपनि औषधि नखानुहोस् । बरु औषधिको साटो खकार निकाल्न र पातलो बनाउन प्रयास गर्नुहोस् । तल लेखिएको उपायले खोकी चाँडै निको बनाउन मद्दत गर्छ ।
कसैलाई छाती पछाडि पट्टि पिठ्युमा हिर्काउन लगाउँदा खकार सजिलै बाहिर निस्कन सक्छ ।
प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुहोस् । यसले खकारलाई पातलो बनाउने हुनाले खोकेर बाहिर निकाल्न सजिलो पार्छ ।
फोक्सा सफा राख्नका लागि दिनभरिमा धेरैपटक खोक्नुहोस् । खोक्दा मुख छोप्न नभुल्नुहोस् ।
हिंडडुल गरेर वा ओछ्यानमा यताउति फर्केर तथा बसेर आफूलाई क्रियाशील बनाइराख्नुहोस् । यसो गर्दा खकारलाई फोक्सोबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
घाँटीलाई सजिलो पार्न कागती तथा मह मिसाएको चिया वा गाउँघरमा बूढाबुढीले प्रयोग गर्ने जडिबुटीको उपचार विधि अपनाउनुहोस् । बजारबाट किनेर ल्याएको खोकीका झोल औषधिहरू खास लाभदायक हुँदैनन् ।
यदि खोकी धेरै लागेर रातभर सुत्न दिंदैन भने कोडिन भएको खोकीको औषधि थोपा खान सकिन्छ ।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा ! खकार पहेंलो, हरियो वा रगत मिसिएको आउछ भने त्यस्तो खोकी निमोनिया वा क्षय रोगको कारणले हुन सक्दछ ।
क्षय रोग किटाणुका कारणले हुने गम्भीर रोग हो । यसले प्राय गरी फोक्सोमा असर गर्दछ । क्षय रोग र एड्सका लक्षणहरू उस्तै उस्तै हुन्छन् तर यी दुई भिन्न प्रकारका रोगहरू हुन् । क्षय रोग भएका पुरुष, महिला तथा बालबालिकाहरू सबैलाई एड्स हुँदैन तर एचआइभी भएकालाई सजिलै सँग क्षयरोग हुन सक्छ किनकि उसको शरीर ज्यादै कमजोर हुन्छ र यसका विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता हराउँछ । अहिले एड्स रोगबाट मर्ने प्रत्येक ३ व्यक्ति मध्ये एक व्यक्ति क्षयरोगका कारणले मर्ने गर्छ ।
एड्स भएका व्यक्तिहरू भए पनि क्षय रोगलाई निको पार्न सकिन्छ । त्यसकारण यसको उपचार तुरुन्त गर्नुपर्दछ । कुनै एचआइभी भइकाले क्षयरोगको उपचार शुरु गर्न थाले पछि उनीलाई एआरटी पनि शुरु गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई एचआइभी सेवा र उपचार कार्यक्रम सँग सम्पर्क गराउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
एचआइभी भएका व्यक्तिलाई न्यूमोनिया भएमा एआरटी शुरु गर्नुपर्ने हुनसक्
न्यूमोनिया फोक्सोको संक्रमण हो । न्यूमोनिया हुँदा फोक्सो भित्रका साना श्वास–प्रश्वासका नलीहरू र हावामा प्रभावित हुन्छन् । बुढाबुढी तथा धेरै बिरामी वा कमजोर मानिसहरूलाई प्रायगरी न्यूमोनिया हुनेगर्छ ।
एचआइभी भएका व्यक्तिहरूका लागि न्यूमोनिया एक खतरनाक समस्या हुन सक्छ । यसलाई तुरुन्त एन्टिव्याक्टेरियलले ठीक सँग उपचार गरिहाल्नुपर्छ । फोक्सो कहिलेकहीँ न्यूमोनिया भएका व्यक्तिलाई अस्पतालमा लगेर नसाबाट औषधिहरू दिएर उपचार गर्नपर्नेुहुन्छ ।
छोटो र छिटो श्वास फेर्नु (वयस्क व्यक्तिले एक मिनेटमा ३० पटक भन्दा बढी श्वास फेर्नु । )
सास फेर्न गाह्रो हुनु ।
अकस्मात कडा ज्वरो आउनु ।
खकारमा हरियो, खिया रंग जस्तो वा रगत भएको देखिनु ।
रोगी एकदम अशक्त हुन्छ ।
ज्वरो झार्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ पिउनुहोस् ।
१० दिन वा सो भन्दा बढी दिनसम्म ‘को–ट्रिमोक्साजोल’ खानुहोस् ।
२४ घण्टासम्म राम्रो भएन वा अझ खराबी भयो भने स्वास्थ्य सेवा लिनुहोस् ।
मुख र घाँटीका समस्याहरू
एचआइभी भएका व्यक्तिलाई मुखका समस्याहरु हुनु सामान्य हो । कुनै कुनै समस्याहरुलाई जेन्सन भाइलेट जस्ता सामान्य मुख घाटी खकाल्ने औषधिहरुले दैनिक रुपमा खकालेर निको पार्न सकिन्छ वा हाइडेजन पेरोक्साइड झोललाई उति नै भाग पानी राखेर खकाल्न पनि सकिन्छ । तर यो निल्नुहुदैन ।
मुखमा दुख्ने घाउ भए जुस तान्ने पाइपको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
मुख वा शरीरको भोजन जाने अंगहरूमा समस्या हुँदा मानिसले सामान्यतया खाना खान सक्दैन । यसले समस्या पर्दा मानिस कमजोर, कुपोषित हुन्छ र संक्रमण विरुद्धको लड्ने क्षमतामा झन ्ह्रास आउन सक्छ । यसकारण:
थोरै–थोरै मात्रामा खानेकुरा पटक–पटक खाइरहनुपर्छ ।
खानामा केही तेल वा बदाम खानुहोस् यसले बढी शक्ति दिन्छ ।
काँचो सागसब्जी नखानुहोस् । त्यसलाई शरीरले पचाउन कठिन हुन्छ र त्यसमा किटाणुहरू पनि हुनसक्ने हुन्छ ।
प्रशस्त मात्रामा झोल कुरा खाइ जलवियोजन हुन दिनुहुदैन ।
मुख तथा घाँटीभित्र घाउ हुनु
मुखको कुनामा घाउ हुनु वा जुठो उच्छिनुको् कारण कुपोषण पनि हुन सक्छ ।
एचआइभी भएका धेरै व्यक्तिहरूमा मुखभित्र घाउ तथा दाँत र गिजाको समस्या पनि हुने गर्छ । यसकारण:
नरम खानेकुरा खानुहोस् । कडा र साह्रो चपाएर खानेकुराहरू नखानुहोस् ।
सादा खाना खानुहोस् मसालादार खाना होइन ।
पीडा कम गर्न चिसोखानेकुरा, झोल पदार्थहरू खानुहोस् । र मन तातोपानी र नुनले कुल्ला गर्नुहोस् ।
मुख वरिपरि घाउ हुनु, फुट्नु तथा पानी फोकाहरू आउनु
ओठहरूमा पीडादायी फोडा तथा घाउहरू उठ्नु जनै खटिराका भाइरसको कारणले हुनसक्छ । स्वस्थ मानिसलाई यी घाउहरू चिसोले अथवा ज्वरोको कारणले आउन सक्छन् तर एचआइभी भएकालाई यस्ता घाउहरू कुनैपनि समयमा आउन सक्छन् । यी घाउहरू धेरै समयसम्म रहिरहन सक्छन् तर आपैm हराएर जान्छन् । यी घाउहरूमा संक्रमण हुन नदिन वा पाक्न नदिन घाउमा जेन्सन भायलेट लगाउनुहोस् । ‘एसाइक्लोभिर’ नाम गरेको औषधि पनि सहायक सिद्ध हुन्छ । यी घाउहरू छोए पछि आफ्ना हातहरू धुनुहोस् ।
मुखभित्र सेता धब्बाहरू आउनु
यो फंगसको संक्रमण बाट हुने रोग हो । यसको कारणले मुखभित्रको छालामा, जिब्रोमा र कहिले कहीँ मुख पेट जोड्ने नलीमा सेता दागहरू तथा घाउहरू हुन्छन् । यसको कारणले गर्दा छाती दुख्ने गर्छ ।
यी दागहरू गाला र जिब्रोमा दही टाँसिकएको जस्तै देखिन्छन् । एचआइभी भएका व्यक्तिलाई यस्ता सेता धव्वाहरु आएमा एआरटी शुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
दाँत माझ्ने नरम ब्रस वा सफा कपडाले दिनको ३–४ पटक बिस्तारै जिब्रो र गिजालाई रगड्ने गर्नुहोस् । त्यसपछि नुन पानी वा कागती पानीले मुख कुल्ला गर्नुहोस् । यसका साथै तलका कुनै एउटा उपाय अपनाउनुहोस् ।
यदि यो ज्यादै दुखेको छैन भने कागती चुस्ने गर्नुहोस् । कागतीको अमिलोले फंगसलाई कम गर्छ । वा
जेन्सन भायलटे एक प्रतिशत झोलले दिनमा दुईपटक मुखको कुल्ला गर्नुहोस् तर यो झोल ननिल्नुहोस् । वा,
निष्टाटिन १० थोपा वा १ मि.लि. घोललाई मुखमा एक मिनेटसम्म राखिरहनुहोस् र त्यसपछि त्यसलाई निल्नुहोस् । यो तरिका पाँच दिनसम्म दिनको तीन वा चार पटकसम्म गर्नुहोस् । वा,
धव्वा ज्यादै भएको छ भने केटोकोनाजोल नामक औषधि सेवन गर्नाले फाइदा हून्छ । यस्को २०० मिलि ग्रामको चक्की दिनको दुईपटक १४ दिनसम्म खानुपर्छ । गर्भवतिले यो औषधि खानुहुदैन ।
भोजन नलीमा धव्वा आउनु
यस्तो धव्वाहर भोजन नलीमा पनि आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा खान र पिउन पीडा हुन्छ । यस्तो भएमा सो व्यक्तिलाई तुरुन्त अस्पताल लग्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनीले औषधि निल्न सक्छन् भने पहिलो मात्रा प्mलुकोनोजोल ४०० मिग्राको चक्की र त्यसपछि दिनको एक पटक २०० मिग्राको चक्की १४ दिनसम्म दिनुपर्छ । यदि औषधि खाएको चार पाँच दिनमा पनि सुधार आएन औषधिको मात्रा दोव्वर वा ४०० मिग्राको चक्की दिनुपर्छ ।
घाउ तथा खटिराहरू
छालामा चोट लागेर घाउ हुने गर्छ । चोटपटक लाग्दा घाउ हुन्छ भने खटिरा प्राय जसो किटाणु वा छालामा दवाव परेर हुनेगर्छ । लामो समयसम्म बिछ्यौनामा थला पर्ने मानिसलाई सजिलै सँग यस किसिमको घाउ हुनेगर्छ । काटेको, चोट लागेको वा खुला घाउलाई सफा राखेमा संक्रमण हुने डर हुँदैन ।
घाउ तथा खटिराको साधारण उपचार :
१. कम्तीमा पनि दिनको एकपटक सफा पानी र साबुनले चोटपटक वा घाउलाई धुनुहोस् । पहिले चोट लागेको घाउको वरिपरि धुनुहोस् त्यसपछि बीचबाट छेउ सम्म धुनुहोस ्। यदि सम्भव हुन्छ भने पुछ्नका लागि छुट्टा छुट्टै कपडाका टुक्राहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।
२. घाउमा पिप वा रगत छ भने पट्टी वा सफा टुक्रा कपडाले छोप्नुहोस् । पट्टीलाई खुकुलो गरेर लगाउनुहोस् र दिन–दिन बदल्नुहोस् । यदि घाउ सुख्खा छ भने हावा पर्ने गरी खुला छोड्नु राम्रो हुन्छ । यसोगर्दा छिटै निको हुन सक्छ ।
३. यदि चोट खुट्टा वा पैतालामा छ भने खुट्टालाई मुटुको तहभन्दा माथि सम्भव भएसम्म उठाएर राख्नुहोस् । रातको समयमा खुट्टा उठाएर सुत्नुहोस् । लामो मयसम्म उठिरहनेर बसिरहने काम नगर्नुहोस् । अलिअलि हिंड्दा फाइदा नै हुन्छ ।
४. घाउ सफा गरेका कपडा वा पट्टीलाई साबुन पानीले धुनुहोस् त्यसपछि यसलाई घाममा सुकाउनुहोस् । अथवा यसलाई केही समय सम्म उमालेपछि सुकाउनुहोस् । यदि त्यो कपडा वा पट्टीलाई पुनः प्रयोग नगर्ने हो,गर्नु छैन भने त्यसलाई जलाइदिनुहोस् वा गाडिदिनुहोस् ।
घाउहरूको घरायसी उपचार
मेवा: यस फलमा भएको एक किसिमको रसायनले घाउहरूको पुरानो पाप्रालाई नरम बनाउनुका साथै यसलाई सजिलै उप्काउन मद्दत गर्छ ।
मेवाको बोटको चोप र काँचो मेवाको दुधे चोपले सफा कपडा वा गजलाई भिजाउनुहोस् । यसलाई घाउमा टम्मसँग बाँधेर दिनको तीन पटकसम्म राख्ने गर्नुहोस् ।
मह र चिनी: यसले किटाणुहरू मार्छ, संक्रमणलाई रोक्छ र घाउ छिटो निको पार्नमद्दत पु¥याउँछ । मह र चिनीलाई मिसाएर लेदो बनाउनुहोस् । त्यसपछि लेदोलाई घाउमा थिचेर राख्नुहोस् र बाक्लो सफा कपडा वा पट्टीले छोप्नुहोस् । (यसका लागि चिनी नपाइए सख्खर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ) ।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा ! घाउलाई दिनको दुई पटकसम्म सफा गर्ने गर्नुहोस् । धेरै समय चिनी वा मह राख्नु हुदैन ।
सावधान हुनुहोस्ः बढी मात्रामा पोटास हालियो वा पानी ज्यादै तातो भयो भने छाला खुइलिन्छ ।
एचआइभी भएका व्यक्तिलाई कडा छाला संक्रमण र ज्वरो आएको छ भने एआरटी औषधि शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संक्रमण भएका घाउ तथा खटिराहरूको उपचार :
घाउ र खटिरो संक्रमण भएर:
रातो, सुन्निएको, तातोर पीडादायी भएमा
संक्रमण भएका घाउको उपचार ३०६ मा एकदेखि चार नम्बरमा उल्लेख गरिए अनुसार गर्नुहोस् र तलका निम्न उपायहरू पनि गर्नुहोस्ः
घाउमाथि दिनको चारपटक २० मिनेटसम्म तातोपट्टीले सेकी राख्नुहोस् । अथवा एक बाल्टिन मन तातो पानीमा साबुन वा पोटास हालेर घाउलाई भिजाउने गर्नुहोस् । चार वा पाँच लिटर घोल्नुहोस् । संक्रमण घाउलाई मुटुको तहभन्दा माथि उठाएर राख्ने गर्नुहोस् । पोटास नभए नुनले सफा गरेपनि हुन्छ ।
चोट लागेको घाउका पाप्राहरू भिजाइसके पछि ‘हाइड्रोजन परोक्साइड’ ले पखाल्नुहोस्। पाप्राहरू सफा गजको टुक्रा वा चिम्टाले निकाल्ने गर्नुहोस् ।
जेन्सन भायलेट उपलब्ध छ भने त्यस घाउमा लगाएर मात्र पट्टी बाध्नुहोस् ।
यदि एकै समयमा धेरै संक्रमण युक्त घाउ भएको छ र ज्वरो पनि आएको छ भने एन्टिव्याक्टेरियलले उपचार गर्नुहोस् । इरिथ्रोमाइसिन, डाइक्लक्सालिन वा पेन्सिलिनको १० दिनसम्म प्रयोग गर्नुहोस् ।
संक्रमण घाउ (पिलो तथा खटिरा) को उपचार :
नफुटेका पिला तथा खटिराहरू भनेका छालाभित्र पिप जमेर बनेका पीडा युक्त गाँठाहरू हुन् । यिनीहरू सामान्यतया काछ तथा काखीहरूमा तथा चाक, पिठ्युर तिघ्रामाथि आउँने गर्छन् ।
तपाईले गाँठो आएको थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्त दिनको चारपटक २० मिनटसम्म तातो सेकपट्टी गरिहाल्नुहोस् । प्रायशः यसले गाँठोको मुख खोल्छ र भित्रको पिप बाहिर आउँछ । पिप बाहिर नआउन्जेल सम्म र ती घाउहरू निको हुन सुरु नहुन्जेल सम्म सफा खुकुलो कपडाले छोपी राखिरहनुहोस् । यदि यो अति नै ठूलो भएको छ र ज्यादै दुख्छ भने स्वास्थ्य कार्यकर्तासित सल्लाह लिनुहोस् । जसले निर्मलीकृत औजारले पिलोबाट पिप निकाल्न सक्छ । इरिथ्रोमाइसिन, डाइक्लक्सालिन वा पेन्सिलिनको १० दिनसम्म प्रयोग गर्नुहोस् ।
कहिले सहयोग लिने :
यदि घाउ र तलका चिह्नहरू देखिएका छन् भने एचआइभी र एड्सको उपचारका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई जचाउनुहोस् ।
घाउ वरिपरिको रातो क्षेत्र ठूलो हुँदै बढ्दै गएमा ।
यदि घाउ र निम्नबमोजिम भएमा औषधि उपचार गरिहाल्नुहोस्ः
तपाई आफ्नो गर्दन, काछ वा काखीमा ग्रन्थी सुन्निएको अनुभव गर्नु हुन्छ भने,
घाउ गन्हाउन वा त्यसबाट खैरोवा फुस्रो पिप आउन थाल्यो भने वा घाउ कालो हुँदै त्यसमा फोका उठ्न वा पाप्रा पर्न थाल्यो भने यसो भएमा मासु कुहिएको हुनसक्छ ।
एन्टिवायोटिक्स लिएर पनि निको भएको छैन भने
मानसिक उल्झन (सुद्धी हराउनु)
एड्सका कारणले कुनै व्यक्ति लामो समय सम्म बिरामी रहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिमा मानसिक उल्झन हुनु सामान्य कुरा हो । यस्तो समस्या एच.आई.भी.को संक्रमण र अन्य संक्रमण हुँदा मानसिक विरक्ति औषधिको सामान्य असरहरूले पनि हुन सक्छ ।
एड्सको पछिल्लो अवस्थामा (र क्यान्सर जस्तै अन्य गम्भीर बिरामीहरूमा) हुने दुःखाइ ज्यादै पीडादायी हुन्छ । यो दैनिक जीवनको एक भाग नै हुन्छ । त्यस्तो दुखाइ धेरै कारणहरू बाट हुन सक्छ, जस्तैः
हलचल गर्न असमर्थ हुनु,
संक्रमणहरू, जस्तै जनै खटिरा आउनु,
छालामा घाउहरू हुनु
खुट्टा र पैताला सुन्निन
दुखाइको उपचार (औषधि प्रयोग नगरी) :
आरामदायी व्यायाम, प्रार्थना वा ध्यान गर्नुहोस् ।
नाना भाँतीका कुराहरू मनमा नखेलाउनुहोस् ।
संगीत सुन्नुहोस् अथवा कसैलाई धार्मिक ग्रन्थ पढ्न लगाउनुहोस् वा कथा भन्न लगाउनुहोस् ।
हात र पैतालामा सुन्निएको दुखाइका लागि सुन्निएको भागलाई उठाएर राख्नुहोस् ।
नसा दुखेर हात खुट्टाहरू भतभती पोले पानीमा डुबाएर राख्ने गर्नुहोस् ।
छालामा छुँदा नै दुख्ने हुँदा बिछयौनामा नरम किसिमको खोल (वा तन्ना) र तकिया वा जनावरको छाला बिछयाएर सुत्नुहोस् । कुनै मान्छेलाई छुनु पर्दा बिस्तारै छुने गर्नुहोस् ।
टाउको दुखेमा कोठालाई अंध्यारो र शान्त राख्नुहोस् ।
अक्युप्रेसरले कुनै–कुनै दुखाइलाई कम गर्न मद्दत गर्नसक्छ ।
औषधिहरू द्वारा दुखाइको उपचार :
तलका औषधिहरू दिन प्रति दिन प्रयोग गर्नाले (दीर्घ पीडा हुने दुखाइलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सहायक हुनेछ । ती औषधिहरू निर्देशन अनुसार नछुटाईकन नियमित रूपमा सेवन गर्नुहोस्। यदि दुखाइले एकदमै च्यापेसम्म कुर्नु भयो भने पछि ती औषधिहरूको प्रयोग गर्दा तिनीहरूले भने जस्तो काम गर्दैनन् ।
मलुवा दुखाइको औषधि जस्तै पारासिटामोल
‘आइवुप्रोफेन’– यो औषधि अलि कडा औषधिको आवश्यक भएमा लिनुपर्छ ।
‘कोडिन’– कडा दुखाइमा लिने औषधि
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=Where_Women_Have_No_Doctor:सामान्य_स्वास्थ्य_समस्याहरू&oldid=319" बाट निकालिएको